Wazi njani ukuba zingaphi iiyure omamele umculo kwiSpotify ngo-2017 | Iindaba zeGajethi
I-Spotify ngokungathandabuzekiyo yeyona nkqubo isasazwayo yokusasaza umculo kwihlabathi, kwaye itshintshile kule minyaka idlulileyo ngendlela esiwudlalela ngayo umculo, ngakumbi indlela esiwufumana ngayo. Yile ndlela iqonga elilawule ngayo ukusukela oko lasungulwa ukuze liphumelele ngaphezulu kwento engaphantsi Izigidi ezili-140 zabasebenzisi, ezingama-60 ezigidi zabasebenzisi abahlawulayo.
Emva kokubhengezwa komanyano lwayo kunye neqela layo laseTshayina u-Tencent, iqonga lisungule inkqubo yalo ekhethekileyo unyaka nonyaka ukufumana ubunzulu bexesha lethu esilichithe simamele umculo ngenxa yabo. Fumana nathi ukuba zingaphi iiyure omamele umculo kwiSpotify ngonyaka ka-2017 ngamanyathelo ambalwa alula.
Yintoni ekufuneka siyenzile ukwazi ukuba mngakanani umculo esimameleyo ngeSpotify kunyaka ka-2017? Ewe, ilula, siza kuya kuyo www.2017appappped.com, iwebhusayithi eyayisungulwe nguSpotify ukuze sifunde ngakumbi malunga nokuba lingakanani ixesha esilibeke kwiqonga labo, kodwa ikwayeyona ndlela siyithandayo, eyona ngoma siyimameleyo kunye neqela lethu lonyaka. Ngale nto siza kusombulula iphepha lemibuzo elisebenzisanayo, ukuba sifuna ukucaca. Mhlawumbi ezi datha ziya kuphela zisothuse.
Kwimeko yam, ndityala imali eyi-33.912 imizuzu, ngaphezulu kweeyure ezingama-565, ukuze ndonele nangakumbi xa ndicinga ukuba ndibhatala ipremiyamu, ubuncinci sinokungabaza ukuba uyasisebenzisa na ngaphandle kweqonga. endikhe ndakhamisa nayo). Yiba nokuba kunokwenzeka, ezi ntlobo zamanyathelo ayizizo ezenze ukuba iSpotify ithandwe kangaka, kodwa inyani yokuba ujongano lomsebenzisi yeyona ilula ukuyisebenzisa kwaye Inkqubo yayo esebenzayo yamaqela amaninzi, umamele umculo ongakanani kwiSpotify kwi2017?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Wazi njani ukuba zingaphi iiyure omamele umculo kwiSpotify ngo-2017